स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार हुँदै
काठमाडौं । सरकारले सञ्चालन गरेको ४ वर्षपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ जिल्लामा विस्तार हुने देखिएको छ । सरकारले विसं २०७२ चैतदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । शुरू गरेको वर्ष नै सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, ४ वर्षपछि मात्र स्वास्थ्य बीमा ७७ जिल्लामा नै पुग्ने लागेको हो ।
हालसम्म ६९ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । बाँकी ८ जिल्लामा भने यसै आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार हुने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको भनाइ छ । ६ जिल्लामा यही चैत २५ गते एकैपटक यो कार्यक्रम आरम्भ गर्ने बोर्डको तयारी छ ।
बोर्डले चैत २५ गते ५ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । त्यस अवसरमा मनाङ, मुस्ताङ, ताप्लेजुङ, बारा, सर्लाही र दोलखामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । त्यसलगत्तै केही समयमा नै काठमाडौं र ललितपुरमा पनि स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बोर्डका सूचना अधिकारी हिमाल ज्ञवालीले बताए ।
‘हालसम्म ६९ जिल्लामा यो बीमा कार्यक्रम विस्तार भइसकेको छ । चैत २५ गते वार्षिकोत्सवको अवसरमा ६ जिल्लामा यो कार्यक्रम विस्तार हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि चालू आवमा नै काठमाडौं र ललितपुरमा पनि यो कार्यक्रम विस्तार हुन्छ । त्यसपछि स्वास्थ्य बीमाको पहुँच सबै जिल्लामा विस्तार हुन्छ ।’
पहिलो चरणमा कैलाली, बागलुङ र इलामबाट यो कार्यक्रम शुरू गरिएको थियो । शुरूका वर्षहरूमा यस कार्यक्रमको विस्तार व्यापक मात्रामा भएको थिएन । तर, अहिले करीब सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम विस्तार हुने पक्का भएको छ । अब काठमाडौं र ललितपुरमा यो कार्यक्रम शुरू गर्न कुनै समस्या नहुने बोर्डको भनाइ छ ।
सरकारले सबै नेपालीहरूको स्वास्थ्य औषधोपचारमा सहयोग पुर्‍याउने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालनमा गरेको थियो । बोर्ड तथ्यांकअनुसार हालसम्म ३७ लाख ४९ हजार ६२४ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् ।
‘स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५’ अनुसार यस सेवामा सहभागी हुन पाँच सदस्यीय परिवारले वार्षिक रू. ३ हजार ५०० बीमाशुल्क तिर्नुपर्छ । यसबापत उनीहरूले रू. १ लाखसम्मको सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन् ।
यस्तै, पाँचभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारको हकमा जनही रू. ७ सयका दरले बीमाशुल्क तिर्नुपर्छ । बीमांक पनि सोहीअनुसार बढ्ने व्यवस्था छ । पहिले एक परिवारले रू. ५० हजारसम्मको सेवासुविधा पाउने व्यवस्था थियो ।
बीमा गर्दा प्रिमियममा परिचयपत्र प्राप्त अति गरीबले शतप्रतिशत, गरीबले ७५ प्रतिशत र सीमान्तकृतले ५० प्रतिशतसम्म छूट पाउँछन् । स्वास्थ्य बीमाले भर्ना उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरणजस्ता उपचारात्मक सेवा लिन पाउँछन् । साथै, खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व जस्ता प्रतिकारात्मक सेवा दिइन्छ । तोकिएभन्दा बढी रकमको चश्मा, स्वास्थ्यसम्बन्धी यन्त्र, प्लास्टिक सर्जरी र कृत्रिम गर्भाधानलाई भने स्वास्थ्य बीमाले समेट्दैन ।
बालबालिका बीमामा एकरूपता ल्याउन नयाँ मापदण्ड[२०७८ बैशाख, ८]
१७ सोलार प्लान्टलाई निर्माणको अनुमति[२०७८ बैशाख, ७]
अग्रवाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारीमा बीमा समिति[२०७८ बैशाख, ६]
नेपालले भारतको एक्सचेन्जबाट विद्युत् किन्न सक्ने[२०७८ बैशाख, ३]
कोरोना बीमामा करीब ६ अर्ब भुक्तानी[२०७८ बैशाख, २]
रेल सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा[२०७८ बैशाख, ८]
सेज, औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधारदेखि एसएमई प्राथमिकतामा[२०७८ बैशाख, ८]
उपभोग्य वस्तुको ढुवानीमा ट्राफिक प्रहरीको अवरोध[२०७८ बैशाख, ८]
बजेट सिलिङप्रति मन्त्रालयहरू असन्तुष्ट[२०७८ बैशाख, ८]
Raj Kumar Koirala
[Apr 2, 2021 03:45am]
Swasthya Bima kasari ko bat garauna sakinchha .k k Document chahinchha ra arkam kaslai bhujhaune ? bahira ka karmachari ra kamdarharule bima garna pauchha ki paudaina pasta pari diya ramro hunethiyo.
कोरोनाको दोस्रो लहरलाई सामान्य रूपमा नलिऔं
छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगी
बोनस शेयर कस्तो अवस्थामा जारी गर्न पाइन्छ ?
रेल सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा
सेज, औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधारदेखि एसएमई प्राथमिकतामा